IINDIDI ZEESHELLES ZOPHAHLA (IZIMBO ZOYILO) - UKUPHUCULWA KWEKHAYA
Eyona Ukuphuculwa Kwekhaya Iindidi zeeShelles zophahla (iZimbo zoYilo)
Iindidi zeeShelles zophahla (iZimbo zoYilo)
Apha ngezantsi sabelana ngeentlobo ezahlukeneyo zamaphepha ophahla kubandakanya ezona zitayile zithandwayo kunye nezinye zeenzuzo kunye nezibi.
Ukudala ikhaya lamaphupha akho kuza nezigqibo ezininzi. Ngoku ekubeni uyila, unokhetho oluninzi onokukhetha kuzo. Elinye lawona macandelo abalulekileyo ekhayeni lakho luphahla. Ke uthathe isigqibo sokusebenzisa uphahla. Ezi zinto zinestayile, ziyathandeka, kwaye zikhusela ikhaya lakho kwizinto ezinjengemvula, ubushushu elangeni, kwikhephu, emoyeni nakwizilwanyana.
Ukukhetha uhlobo lophahla lwophahla kufuna uvavanyo ngononophelo. Loluphi uhlobo lwezinto ozifumanayo zinomtsalane kwaye ufuna ukuzisebenzisa? Luthini uhlahlo-lwabiwo mali lwakho ngokuthenga izinto kunye nokufakwa? Ngaba uceba ukuzifaka ngokwakho? Ayizizo zonke ii-shingles ezinokuthi zi-DIY-ed ke ezinye zifuna iingcali ukufakela kunye nokhuseleko. Kuya kufuneka ugcine engqondweni ukubakho kwezinto ozikhethayo. Unokufuna ukuqaphela ukuba unezicwangciso zexesha elizayo zokutshintsha endaweni yazo kwaye ngenxa yoko unokufuna ukukhetha into engabizi kakhulu kwaye kulula ukuyisusa.
Zintoni iiShelles zophahla?
Amacangca ophahla oluDibeneyo
Iithayile zekhonkrithi zekhonkrithi
Iindidi zophahla lwentsimbi
Ukuma kweepaneli zokuma
I-Shake yesiNtu, iShingle, iTile kunye neSlide yoyilo
Iintsimbi zophahla zigubungela uphahla ngendlela edibanayo kwaye zikhusela ubume kwizinto zemozulu. Zihlala zicaba kwaye zixande ngokobume. Zenziwe ngeentlobo ezahlukeneyo zezinto: ukhuni, isileyiti, isinyithi, iseramikhi, ifayibha yesamente, iplastiki kunye nokudityaniswa. Kukho imibala eyahlukeneyo, ubukhulu, ubungakanani, kunye nemilo efumanekayo ukuze ithelekise iimfuno zabathengi bonke.
Gcina ukhumbula ukuba amaphahla ophahla asetyenziselwa uphahla olunendawo eyaneleyo yokuchitha amanzi kwinkqubo yomjelo usebenzisa amandla omxhuzulane. Izithambisi zophahla azisetyenziswa kuphahla olusicaba. Ndwendwela eli phepha ngolwazi oluthe kratya malunga iintlobo zophahla .
Ii-singles ze-Asphalt lolona hlobo luqhelekileyo lusetyenziswa kophahla olusetyenziselwa indawo yokuhlala. Yeyona nto ingabizi kakhulu phakathi kwezinye izinto zophahla. Kukwayaziwa phakathi kwabanini bamakhaya abathanda i-DIY njengoko kulula kakhulu ukuyifaka, ekwehlisa iindleko zokufaka. Yeyona ndawo ithandwa kakhulu kwiindawo zokuhlala eMntla Melika kwaye yaqanjwa eMntla Melika ngo-1901.
I-Asphalt yaziwa ngokuba yibhitumene. Yindlela emnyama, encangathi kunye nokuqina okuqinileyo kwepetroleum. Ihlala isetyenziswa kulwakhiwo lwendlela kunye neemveliso zokuthintela amanzi ezinje ngophahla lwamatye.
Olu hlobo lwe-shingle shingle lungahlala ukusuka kwiminyaka engama-20 ukuya kwengama-25 kwimeko yemozulu elungileyo, eyonelisa kakhulu uninzi lwabanini makhaya. Kuza kunye nemibala eyahlukeneyo kunye noyilo. Olunye uhlobo lwe-asphalt shingles luxelisa iintlobo zeendleko ezibiza kakhulu zophahla olukhangeleka kubathengi abaninzi. Enye into elungileyo kukuba i-asphalt shingles inokuphinda isetyenziswe ukuba abaninimzi banqwenela ukuyibuyisela.
Ixabiso eliphakathi lokutya emtshatweni
Uphahla lwe-asphalt shingle lungabiza ukusuka kwi-2.50 ukuya kwi-5.00 yeenyawo ngonyawo olufakelweyo. Oku kuzisa indleko zizonke kwindawo ethile ye- $ 7500 ukuya kwi-15000 yeedola kuphahla olupheleleyo lweenyawo ezingama-3000.
I-Wood shingles lolona hlobo ludala lwophahla phakathi kwezinye. Iinkuni ezisetyenziswa kwimixokelelwano zihlala zisuka kwipayini, kumthi obomvu, kumsedare obomvu nakwimithi yemisipres. Nangona zibiza kakhulu kune-asphalt shingles, i-shingles yeplanga isasaziwa phakathi kwabanini bamakhaya ngenxa yobuhle bendalo beenkuni. Ingadlulela kwiminyaka engama-30, kodwa kukho imfuneko yokuhoya iinkuni.
Iinkuni zisemlilweni ngenxa yeentubi kunye neengxaki zezinambuzane. Kubanini abanolwazi ngokusingqongileyo, olu lukhetho lwe-organic kunye ne-eco-friendly. Yonga amandla ngakumbi xa ithelekiswa ne-asphalt enceda ukwehlisa iindleko ngokubhekiselele kubushushu kunye nomoya opholileyo.
Imithi yomsedare ibiza malunga ne- $ 5.00 ukuya kwi-9.00 yeenyawo ngeenyawo. Kuphahla olupheleleyo umntu unokulindela ukuhlawula ngokomndilili we-15,000 ukuya kwi-27,000 yeedola.
I-organic shingles yenziwa ngesiseko sesiseko sezinto eziphilayo zangaphambili ezinje ngephepha, iselulosi, kunye nefayibha yomthi. Ezi zinto zixutywe kunye nokwaleka okuphezulu kwe-asphalt yokuncamathelisa kunye negranules zeceramic ukuyenza ingangeni manzi.
I-organic shingle esekwe ephepheni ayikhuthazwa kwabo bahlala kufutshane neendawo ezinemithi njengoko ixhaphake kwimililo. Nangona kunjalo, i-organic shingles incinci kune-fiberglass kwimozulu ebandayo. Indibaniselwano yomthi kunye nephepha yomelele kakhulu kwaye kunzima kakhulu ukuyikrazula, nto leyo ebenza balungele imozulu yesaqhwithi.
Amacangci ophahla adityanisiweyo akhiwe kwizinto ezahlukeneyo zokwenziwa kubandakanya i-fiberglass, i-asphalt kunye nezinye iimveliso ezihlaziyiweyo. Le nto iyakwazi ukumelana nomlilo kwaye ibambelele kakuhle ngophahla oludityanisiweyo olunokuhlala ngaphezulu kweminyaka engama-20 kunye neminyaka.
I-tile shingles lolunye lolona hlobo luqinileyo lokuphahla. Ngofakelo olufanelekileyo, inokuhlala iminyaka engama-80 ukuya kweli-100. Uninzi lwabanini bamakhaya batsalelekile kwiitiles shingles kuba isitayile. Iithayile zinokubunjwa zibe ziimilo ezahlukeneyo, kwaye ziza zinemibala eyahlukeneyo enokudityaniswa idityaniswe ukwenza iphethini epholileyo. Ezi zibophelelo zihlala zifumaneka kumakhaya amakoloniyali naseMeditera. Nangona kunjalo, i-tile shingles yenye yeendidi ezibiza kakhulu zophahla. Ukufakwa kuthatha uninzi lweendleko. Ulwakhiwo lukwafuna ukuvavanywa yingcali. Ukuba iithayile zinzima kakhulu, kunokubangela ukuba uphahla lonke luwe. Iithayile zinokuqhekeka kwaye zinokubangela ukuvuza kunye nemingxunya.
Ithayile ekhonkrithi yenziwa ngesanti, isamente kunye namanzi. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zemibala, imibala, kunye nobukhulu obufumanekayo kwintengiso. Ubume bunokuba rhabaxa okanye bugudise. Banombala okhulelweyo. Nangona kukho izinto ezinobunzima ezikhoyo, ezi azikhuthazwa kuba zichaphazeleka kumonakalo xa zijamelene nesichotho nekhephu elinzima. Iithayile zekhonkrithi esemgangathweni zinokuphila iminyaka engama-50 okanye nangaphezulu.
Ukufakwa ngokufanelekileyo yinto ebalulekileyo kuba bathambekele ekungeneni kokufuma okuvela emvuleni, emoyeni nakwikhephu. Kungcono ukufuna ingcali enamava eminyaka ukuba umntu unokuthatha isigqibo sokusebenzisa iithayile zekhonkrithi kumakhaya abo. Ngexesha lolungiso okanye lofakelo eluphahleni, kungcono ukuba ungazenzi xa uphahla lumanzi. Iithayile zekhonkrithi zihlala zityibilika kwaye zinokubangela iingozi. Ikalwe kwiCandelo A lokumelana nomlilo. Ukuba ithayile enye yonakele, kulula ukuba uyisuse kwaye ubeke enye endaweni yayo. Akucetyiswa ukuba uzifake kumacandelo amancinci ngenxa yobunzima bokuseka ubungakanani bazo.
I-fiberglass shingles inesiseko seglasi yeglasi yokuqinisa mat. Yenziwe ngeplastiki exhaswa yimicu yeglasi entle. Ixutywe ne asphalt ukuyenza ingangeni manzi. Olu dibana luvelisa izinto ezithembekileyo nezomeleleyo zophahla. Kuwo onke amaplanga ophahla, le yeyona nto ingatshiyo emlilweni. Kukhetho olukhethiweyo kumakhaya akuMntla Melika. Inikwe inqanaba lomlilo lodidi A lokuthintela umlilo.
Abathandi be-DIY bathanda i-fiberglass kuba kulula ukuyifaka. Kukwalungele uhlahlo-lwabiwo mali kwaye kungasindi. Uninzi lwabavelisi banikezela iwaranti yeminyaka engama-30 kwii-fiberglass shingles. Zizondlo ezisezantsi kwaye azophuli xa kukho imfuneko yokulungisa eluphahleni. I-fiberglass inobuhlobo kwindalo. Banetela encinci kwaye kulula ukuhambisa. Zisebenza ngamandla. Kukho iindidi ze-fiberglass apho ubushushu obufunxwe luphahla buncinci obugcina ulwakhiwo ehlotyeni. Nangona i-fiberglass ingahlala ukusuka kwi-15 ukuya kwi-30 iminyaka, ukuyitshintsha kuya kuthetha ngakumbi ukulahla inkunkuma. Kuba zisenayo i-asphalt, ayithathwa njengotyalo-mali oluhle lokusingqongileyo ekuhambeni kwexesha.
Isilayiti lelona litye le metamorphic lihle kakhulu. Yenziwe ngodongwe okanye luthuthu lwentaba-mlilo. I-Slate shingles inokuhlala iminyaka engama-80. Inezinga lokufunxa amanzi asezantsi kakhulu (0.4%) kwaye isebenza kakuhle nakumaqondo obushushu aqandayo. Inokumelana nesichotho kunye nomoya ovuthuzayo. I-Slate shingles iza nemibala eyahlukeneyo, ubukhulu kunye nobukhulu. Ikwangumlilo kwaye inobuhlobo kwindalo.
izimvo zesipho somtshato somyeni nomyeni
Nangona kunjalo, ukufakelwa okungalunganga kunokubangela ukuba iindleko zinyuke kakhulu. Ingcali iyafuneka ukuvavanya ulwakhiwo ukuqinisekisa ukuba inokubamba ubunzima bezilayiti. Ukuba kukho naluphi na ulungiso okanye ufakelo olutsha olufunekayo kufutshane okanye kufutshane nophahla, kunokuba lula kumonakalo. Kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba iingcali ziyabizwa ukuba ziqinisekise ukuba akukho monakalo ubangelwe njengoko kubiza ukuzilungisa nokuzitshintsha.
Uphahla lwentsimbi luhlala lusetyenziselwa ulwakhiwo olunophahla oluphezulu okanye olusicaba. Yomelele kakhulu kwaye ingahlala ixesha elide kakhulu. Ikwangumlilo kwaye ikhusela ulwakhiwo kwimisebenzi yomlilo nakwiingozi zomlilo ezinokubakho. Ayinamanzi kwaye kunqabile kakhulu ukuba kubekho ukuvuza xa ifakwe kakuhle. Ingasinda kumoya ovuthuzayo owenza ukuba ibe lukhetho oluthandwayo kwiindawo ezinesitshingitshane kunye neenkqwithela. Ikhupha ngokulula ikhephu. Kuyanyamezela ukungunda, izinambuzane nokubola.
Xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zentsimbi, isinyithi asikhaphukhaphu kwaye kulula ukusifaka. Yonga umbane. Isinyithi sibonisa ubushushu belanga ukuze sihlale sipholile emini. Nangona kunjalo, uphahla lwentsimbi luvelisa ingxolo xa imvula isiza phezu kwalo. Kuyabiza kakhulu. Njengeemoto, inokuba neentsimbi ngenxa yokunxiba kunye nokukrazula kwizinto. Rhoqo emva kweminyaka embalwa, kufuneka ihlolwe kuba ipeyinti inokususa okanye iziqwenga ezinamazinyo ziya kufuna ukubekwa endaweni yazo.
Kukho izinto ezahlukeneyo ezisetyenziselwa ukufulela ngesinyithi. Ezona zixhaphakileyo yintsimbi, i-aluminium, intsimbi engenasici, ubhedu kunye ne-zinc alloy. Izinto ezidumileyo ezisetyenzisiweyo yintsimbi kunye nealuminium.
Isinyithi sinzima kwaye somelele kune-aluminium. Uninzi lwentsimbi esetyenziselwa uphahla lubhijelwe kwi-zinc ukukhusela kumhlwa kunye nomhlwa. Zihlala zikhutshelwa ngaphandle ngepeyinti ekumgangatho ophakamileyo ukuze zibonakale zinomtsalane kwaye zinesitayile. Ipeyinti ikwakhusela intsimbi kwizinto ezifana nemvula, ubushushu nekhephu.
I-Aluminium ilula kakhulu kwaye inokufumaneka kwiindawo ezininzi zokuhlala. Nangona i-aluminium ingatyiwa ngumhlwa, zihlala zipeyintiwe ukujonga okugqityiweyo kunye nobuhle. Xa kuthelekiswa nesinyithi, i-aluminium ithambekele ngakumbi kwiminyango kuba yinto encinci.
Uphahla lwesinyithi lubonwa njengenye yeentlobo eziphezulu zokuphahla kwensimbi. Ayinamhlwa, ayicobi, okanye ayikrwibi. Icala elisezantsi kuphela kolu hlobo lwophahla kukuba kubiza kakhulu.
Ingxubevange yophahla yenzelwe uzinzo, amandla kunye nemozulu entle. Nangona kungabizi njengophahla lwentsimbi yobhedu, uphahla lwengxubevange lusekwinqanaba eliphezulu lophahla lwentsimbi.
Uphahla lwentsimbi olungenasici alwenzi mhlwa okanye lonakalise. Inomphetho omdaka we-matte grey onika imbonakalo yanamhlanje, ecocekileyo nenobunkunkqele. Iyahlala kodwa ihlala ikwajongwa njengexabiso kakhulu.
Olu hlobo lophahla lwentsimbi lolona khetho lufanelekileyo phakathi kwezinye zonke. Nangona kunjalo, lolona khetho lubiza kakhulu kuba akukho zibophelelayo zibonakalisiweyo eluphahleni.
izipho zooyise kwimithetho yekrisimesi
Olu hlobo lophahla lwentsimbi lukwabizwa ngokuba ziinkqubo zentsimbi. Uphahla lubonakala lufana nokushukuma, ukujija, ithayile kunye noyilo lwesileyiti kodwa izinto ezisetyenzisiweyo ziyintsimbi.
Ukufulelwa kwephepha kuyabiza kakhulu phakathi kweentlobo zophahla lwentsimbi. Kukho iindlela ezahlukeneyo ezikhoyo kwimarike yeemodeli ezipeyintiweyo okanye ezingagqitywanga, ukuze zilungelelaniswe ngokusekwe kukhetho lomthengi.
Iiplastiki ze-shingles lolona hlobo lufikelelekayo kophahla. Kukho iintlobo ezahlukeneyo ezikhoyo kubathengi. Banokubonakala njengodongwe, iqokobhe okanye ukhuni. Uninzi lwezi zinto zenziwe ngeplastikhi zenziwe ngezinto ezirisayikilishwe. Zenziwe kwipolymer ngaphandle kokuqiniswa kwefayibha. Banobunzima obugqithisileyo kwaye kulula ukuyifaka, ke ezi ziyathandwa ngabanini bamakhaya abathanda i-DIY amakhaya abo. Nangona kunjalo, uninzi lophononongo luthi iiplastiki zamakhonkco azibonakali ziyinyani ngenxa yokugqitywa kwazo okuqaqambileyo. Ukomelela kwabo kuyathandabuzeka.
Ezinye iintlobo zeplastle shingles zihlala ziqhekeka kwaye zaphuka ngexesha lemozulu ebanda kakhulu njengasebusika. Kungenxa yokuba iplastiki ngokwendalo ayinako ukumelana nemozulu ebandayo. Akukwacetyiswa ukuba usebenzise iiplastiki kwimozulu eshushu kakhulu. Iplastiki inokuba brittle kwaye yaphule eya kuthi ibangele ukuvuza kunye nomonakalo ongaphezulu eluphahleni.
I-solar shingles lolona hlobo lutsha lwamaphahla ophahla akhoyo kwintengiso namhlanje. Iya isanda ukuthandwa eUnited States. Zikwabizwa ngokuba zii-photovoltaic shingles. Ngokuqinisekileyo yeyona ndlela yoqoqosho yokukhusela uphahla kwimozulu embi. Kule mihla, kukho iinketho zokwenza i-solar shingles ukuba ivele njenge-asphalt okanye i-shingle yesinyithi. Xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zophahla, i-solar shingles ivelisa amandla kunokuba iwuthathe. Ezi zibophelelo zelanga zigqibelele abo bafuna ukonga umbane kodwa bakhethe ukungabi neepaneli ezinkulu zelanga kuphahla lwabo.
ipali barn izicwangciso zasekhaya
iphakame ngegolide iringi yothando
isimemo somtshato esingaqhelekanga sokubhaliweyo kokubamba isibini
uthini uYesu ngomtshato
ivesi yebhayibhile yomfazi endodeni
amagumbi okuhlala kwakhona